भविष्यको ग्यालक्सी ए and र ग्यालक्सी ए of को डिजाइन फिल्टर गरीएको छ Androidsis
केही घण्टा अघि हामीले यस बारे एउटा खबर प्रकाशित गरेका थियौं स्यामसंग टर्मिनलहरूको लागि एन्ड्रोइड .6.0.० मार्शमैलोको नयाँ संस्करणको रोडम्याप अपडेट गर्नुहोस्। यसमा हामीले दुईवटा टर्मिनलहरू फेला पार्‍यौं, जुन यस समयमा भर्खरको एन्ड्रोइड अपडेट प्राप्त गर्न डेवलपर्स द्वारा स्वीकृतिको लागि पर्खिरहेका छन्, यो अपडेट हुने टर्मिनलहरूको सूचीमा छ। यी उपकरणहरूको नाम छ, ग्यालक्सी A5 र ग्यालक्सी A7.
यी उपकरणहरू बारे निश्चित रूपमा हामी कुरा गर्न लागेका छौं र बाहिरबाट जान्छ कि थुप्रै छविहरू चुहावट भयो जसले कोरियाली ब्रान्डको भविष्यका उपकरणहरूको भौतिक उपस्थिति देखाउँदछ। यी छविहरूमा हामी देख्न सक्दछौं कि उपकरणको यो दोस्रो पुस्ताले कसरी प्रथम पिढीको सन्दर्भमा धेरै राम्रो परिवर्तनहरू समावेश गर्दछ।
पहिलो कुरा जुन हामी यो चुहावटमा हाईलाइट गर्न सक्छौं कि नयाँ ग्यालक्सी ए and र ए metal मेटलले बनेको हुनेछ, जसले उत्पादनको यस दायराको पहिलो पुस्तालाई सम्मानमा गुणस्तरमा उफ्रि दिन्छ।
अफवाहहरू छन् कि नयाँ ग्यालक्सी A5 एक शामिल करेंगे ''२ ईन्च स्क्रीन पूर्ण HD रिजोलुसनको साथ। भित्र हामी कोरियालीहरू आफैंले बनाएको प्रोसेसर भेट्टाउनेछौं, Exynos7र यस SoC सँगसँगै यो माली T720 GPU सँग ग्राफिक्सको लागि र GB जीबी र्याम मेमोरी। अर्कोतर्फ, यसको आन्तरिक भण्डारण १ GB जीबी हुनेछ र माइक्रोएसडी स्लट समावेश गर्दछ मेमोरी विस्तार गर्न।
ग्यालक्सी A7 को रूप मा, यो एक संग सुसज्जित हुनेछ ''२ ईन्च स्क्रीन पूर्ण HD रिजोलुसनको साथ। भित्र, यस पटक क्वालकॉम निर्माता हुनेछ जसले उपकरणलाई सार्न यसको क्वाड-कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर प्रदान गर्दछ। तपाईंको र्याम मेमोरी, अफवाहहरूका अनुसार, हुनेछ3जीबी र यसमा १ GB जीबी आन्तरिक भण्डारण हुनेछ, यसको क्षमता माइक्रोएसडी स्लट मार्फत विस्तार गर्ने सम्भावनाको साथ।
दुबै फोनहरुमा उस्तै रियर क्यामेरा छ Me मेगापिक्सल र me मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा। हालको जेनेरेसनको तुलनामा, नयाँ A5 मा केहि डिजाइन परिवर्तन हुनेछ, जस्तै स्पिकरको स्थान परिवर्तन जुन अब तल्लो भागमा छ, र साथै पछाडिको क्यामेरा फ्ल्यासको साथमा स्थानान्तरण हुनेछ। अन्तमा, टिप्पणी गर्नुहोस् कि दुबै उपकरणहरू एन्ड्रोइड .5.१.१ लोलीपप अन्तर्गत चल्नेछन्, कोरियाली ब्रान्डलाई उपकरणलाई एन्ड्रोइड .5.1.1.० मार्शमैलोमा अपडेट गर्नका लागि कुर्दै। सामसु,, यसको अंशका लागि, यसको उपलब्धतामा टिप्पणी गरेको छैन, त्यसैले हामी एक सुरूवात मिति बिना छोड्छौं, र हामीलाई पनि यसको मूल्य थाहा छैन। र तपाइँलाई यी टर्मिनलहरूको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » नयाँ ग्यालक्सी A5 र A7 फ़िल्टर गरियो
कसरी तपाइँको स्मार्टफोनको समाचार को काट्ने धार मा रहन